Xukuumada Puntland oo digniin kasoo saartay dhaq dhaqaaqyada gobolladda Sanaag iyo Hayland (Dhegayso) – Radio Daljir
Nofeembar 26, 2012 4:51 b 0
Garoowe, Isniin, Nov 26, Xukuumada Puntland ayaa maanta magaalada Garoowe ee caasimada ah kasoo saartay Warsaxaafadeed isugu jira Canbaarayn iyo Digniin loo diray maamulka Somaliland oo dhaq dhaqaaqyo ciidan ka wada deegaano kamid ah gobolka Hayland iyo Sanaag Bari.
Wasiirka Wasaarada Warfaafinta Puntland oo warbaahinta u akhriyey Warsaxaafadeedka kasoo baxay Xukuumadda Puntland ayaa sheegay in Puntland aysan marnaba u dulqaadanayn waxa uu ku sheegay gardarada qaawan ee uu wado maamulka Somaliland sida uu hadalka u dhigay.
“Dawlada Puntland u dul qaadan mayso gardarada qaawan ee maamulka Hargeysa, Dawlada Puntland waxay doonaysaa in ciidamda Somaliland iskaga baxaan dhulka Puntland iyadoo arintani khalkhal gelinayso xasiloonida” ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Puntland Md Maxamuud Caydiid Dirir.
Wasiirka ayaa la weydiiyey waxyaabaha Puntland ka hortaagan inay talaabo qaado ayaa sheegay in Puntland doonayso nabad gelyo oo aysan ku deg degin dagaalka hase ahaatee hadii maamulka Somaliland iska dhegatiro nabadgelyada ?in Puntland fulinayso Dastuurkeedda.
Warsaxaafaeedka Xukuumadda Puntland ayaa kusoo beegmay xili dhaq dhaqaaqyo ciidan ay kasoconayaan gobolka Hayland iyo Sanaag Bari kuwaasoo ymid kadib markii Somalilnd sheegtay in sanaaduuqda codbixinta la geynayo degmada Dhahar iyo deegaano kale oo ka tirsan goboladda Hayland iyo Sanaag.